Piper Archives — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ခရီးစဉ်ရဲ့အသစ်စာအုပ်, တက်, ယခုထွက်သည်! ဖတ် ယောဟနျသ Piper'' ကိုယ့်အောက်ကစာအုပ်မှစကားချီး. သင့်အနေဖြင့်စာအုပ် pre-order နဲ့ Risebook.tv မှာပိုပြီးထွက်ရှာတှေ့နိုငျ
ခရီးစဉ် Lee ကနှင့်သူ၏စာအုပ်အကြောင်းကျွန်မသဘောကျတယ်အဓိကအရာတစျခု, တက်, ရိုနှင့်ဆီလျော်မှု၏ဆက်စပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်.
အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု၌ဆက်စပ်မှုမှာရည်ရွယ်ချက်မှာဘုံဖြစ်ပါသည်. အေးမြနေရာအနှံ့ဖြစ်ပါသည်. Mack Stiles ကပြောပါတယ်အဖြစ်, ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျအမြားစုမှာခရစျယာကြီးပြင်းလက်သီးကိုကွောကျရှံ့ရမယ်; အမေရိကန်များထမြောက်စေတော်မျက်ခုံးကိုကွောကျရှံ့. ဒါဟာကျနော်တို့အေးမြမဟုတ်ဆိုလိုသည်. သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်.
သို့သော်ရိုမှာရည်ရွယ်ချက်ရှားပါးသည်. ရိုအဟောင်းခံစားရ. ဒါဟာ unexciting ခံစားရ. ဒါဟာအေးမြမယ့်. သို့သော်လူတိုင်းသိတယ်, နက်ရှိုင်းသောကဆင်း, ရိုဝင်သောအခါ, လူ့အသက်ကိုအပေါငျးတို့သမျိုးစုံပြပွဲဖြစ်လာ. ပိန်သော. Glib. တိမ်သော. ပလပ်စတစ်. ဗလာ. အဆုံးမှာ, အဓိပ်ပါယျမရှိသော.
ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခဲ့သည်. "Cool အပွောငျးအလဲဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်ခရီးစဉ် Lee က၏က "ဖွစကားသည်အရှငျနထေိုငျမရနိုငျ. တိကျစွာ. ရုံအေးမြဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားနေ, ကိုယ့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်, နိမ့်သည်. ထိုအခါခရီးစဉ် Lee ၏စကားသံကိုအော်ဟစ်, တက်!
ကြည့်ဖို့ဒါအများကြီးပိုရှိပါတယ်, သိရန်, ချစ်ဖို့, ခံစား. သူတို့ပျော်စရာလျှော့ချမရနိုင်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန်များရှိပါတယ်. အဆိုပါစကားများ "ပျော်စရာ" "ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်" "ဘောလုံး" "ပါတီ" ဟုအဆိုပါအတွက်ရီစရာအသံ…